दयाहाङदेखि अनमोलसम्म : को उपवास बस्छन्, को मन्दिर धाउँछन् ? - नागरिक रैबार
दयाहाङदेखि अनमोलसम्म : को उपवास बस्छन्, को मन्दिर धाउँछन् ?
काठमाडौं । साउन अर्थात भक्ति-आराधनाको महीना । शरीर शुद्ध गरेर उपवास बस्ने प्रचलन छ । खासगरी महिलाहरु आफ्ना श्रीमानको दीर्घायु र सु-स्वस्थ्यको कामना गर्दै उपवास बस्छन् । विवाहितको मात्र के कुरा, अविवाहित समेत हुनेवाला श्रीमानका खातिर ब्रत बस्छन्, पूजापाठ गर्छन्, मन्दिर धाउँछन् ।